Umehluko phakathi kolwazi nolwazi: uma ulwazi lutholakala ngaphandle - ulwazi, ngakolunye uhlangothi, kutholakala ngaphakathi "Kulapho ulayini wokuhlukanisa"
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Agasti 22, 2020 00: 30 Awekho amazwana
Ulwazi luyisethi yolwazi oluqoqayo kusuka kulokho onakho phakathi nohambo lwakho, bukela, bukela, cabanga futhi uzwe (...) « Ulwazi luphathelene nezinto ezingaphandle komuntu kuphela. Yazi: yazi ungayifunda noma kunini. »
Kepha lolu lwazi yilokho obungakwazi, kepha luvela kumqambi. La ulwazi aluveli kumuntu, njengolwazi, kodwa kunalokho luvela kumdali. Ngakho ulwazi yizici Interiors.
Umuntu okhaliphile akaqhoshi ngolwazi; iziwula zikhombisa ubuwula bazo!
IZwi le-KL nesaga sikaSolomoni
I-Oct21 07: 12